Notontosaina tamin’ny sabotsy 15 sy ny alahady 16 desambra teo teny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano ny fifaninanana rejionaly Analamanga “Tournoi U 10 sy Super-Vétérans 2018”.
Anisan’ireo katita nandray anjara tamin’izany ny klioban’ny Jcba, Mb2All, Bcr, Cbbt, Helaskbi, Bcsm ary ny Asf. Amin’ny lalaon’ny sokajy U 10 tahak’izao, hoy ny SG –n’ny Ligin’Analamanga, dia tsy dia midika inona loatra ny vokatra azo fa ny fitaizana ny kilonga no tena hasongadina. Nampiarahana tamin’ity lalaon’ny kilonga madinika ity koa ny fifaninanana sokajy Super Vétérans noho izy ireo tsy tafiditra ao anatin’ny fifaninanam-pirenena nokarakarain’ny FMBB “Federasiona ny taranja basikety Malagasy”. Anisan’ireo vokatra azo tamin’izany ireto manaraka ireto : Sokajy lehilahy-Bbc # Fobb (39-31), Fobb # Mmbc (38-37). Sokajy vehivavy-Jcba # Mmbc (56-51). Amin’ny faha-12 sy faha-13 janoary izao indray no tohin’ireto “Tournoi” ireto mbola eny amin’ny kianjan’Ankorondrano hatrany.
Ny 12 janoary 2019 : lalao sokajy U 10 sy ankatoky ny famaranana Super-Vétérans.
Ny 13 janoary 2019 : Lalao 3 x 3 U 10 zazalahy sy lalao Kids Star U 10 Team Aranty kapitenin’ny Jcba zazalahy # Team Mitia kapitenin’ny Mb2All zazalahy ary lalao famaranana Super –Vétérans.